Ndi ugwu na-eme ugboro ugboro maka ịgba ígwè? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Hill kwughachiri ịgba ịnyịnya ígwè - ịza ajụjụ ndị a
Ndi ugwu na-eme ugboro ugboro maka ịgba ígwè?
Sortsdị nnọkọ ndị a na-enyere aka iwulite ike na ike - kpọmkwem njirimara aonye na-agba ígwèmkpa. N'ịbụ ndị dị ike ma na-adịkarị n'okpuru otu awa, ha dịkwa oke mma ma ọ bụrụ na ị dị mkpụmkpụ n'oge. Ogologo nkena-ekwughachiị kwesịrị ịnya ịnyịnya ịdị iche iche dabere na ebumnuche gị dịka onye na-agba ịnyịnya, yana ọkwa gị.June 22. 2016 Nọvemba
(Obi Musictọ) - Lovehụnanya ma ọ bụ ịkpọasị ugwu, ha nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ ọzụzụ. Mgbe ha nọkwa n’ọsọ, ọ bụghị iwu na ị ga-agbara ha ọsọ. Ya mere, taa, anyị ga-ekerịta otu ọ kachasị mma ịrị ugwu dị iche iche dị iche iche na otu ị ga - esi tinye ha na mgbatị gị iji meziwanye arụmọrụ gị niile. (egwu dị egwu) (egwu na-ada ụda) A na-agbanyụsịsị ma ọ bụrụ ugwu ma ọ bụ n’ugwu bụ na ị na-ebelata otu ụdị ume ọrụ.
Have ghaghị ịlụ ọgụ na mmetụta nke ike ndọda, n'ezie, yabụ ọ ga-esiri gị ike ịkwaga ahụ gị n'ihu ma yabụ ị ga-eji nwayọ nwayọ na-aga. Yabụ ịhazigharị ijeụkwụ gị bụ ihe mbụ dị mkpa, buru nke a n’uche, ị kwesịrị ịtụle mbọ ị na-agba na ntụgharị ọsọ, ma ọ bụrụ site na mmetụta na nghọta mgbali ma ọ bụ oke obi ma ọ bụ ọbụlagodi ike mgbe ị na-eji nke a. Get ga-enwetakwu echiche ziri ezi banyere otu ị ga-esi arụsi ọrụ ike.
Ọ kachasị mma ileghara ije ahụ anya kpamkpam, belụsọ na ọ bụ ugwu ị maara nke ọma ma mara ogologo oge ọ na-ewe. Chetakwa, ọ bụrụ na ị na-eji ike obi eme ihe, a ga-enwe ntakịrị ngwụcha nke na-ejide mmụba ahụ arụmọrụ. (Joy music) N'iburu nke ahụ n'uche, ọ bụrụ na ị na-alaghachi maka ahụike, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na-agba ọsọ, ịga ije n'elu ugwu adịghị mma dịka ị nwere ike itinye otu mgbalị ahụ dị ka a ga - asị na ị na - na ewepụghị agba ọsọ na mmalite nke oge mgbe ị na-agbalị nnọọ dabara, dị ka ugwu nta ndammana na-arụ ọrụ gị obi usoro nnọọ ike na-enweghị etinye dị ukwuu nje na nkwonkwo gị dị ka ị ga-ọ bụrụ na ị nọ n'ụgbọelu ma ọ bụ na-eje ije ala Ugwu More na otu esi emega ahụ na ugwu na-eso mana ka anyị buru ụzọ leba anya gịnị kpatara, kedụ uru ya? Ugwu ugwu na-agbakwunye ike ndọda ma yabụ na-eme dị ka ọzụzụ iguzogide akwara ụkwụ gị.
M ga-anụ ọpụpụ gị na akwara nwa ehi ma ọ ga-agbanwe gị, ị ga-atụkwasị gị ụkwụ n'ihu gị, ị ga-amalite iji agbụ azụ, akwara ndị ahụ n'azụ ụkwụ gị na-eme obere usoro ịkụ egwu. Oge Bergrep nwere ike dochie nnọkọ ụkwụ na mgbatị ahụ. Ma mgbe ahụ, ị ​​ga-atụgharị nke ahụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịka mma na ugwu nta ma ị nweghị gburugburu, rụọ ọrụ na igbe ọkpọ, nkewa ọkpọ, na ndị na-egbu mmiri iji nyere aka.
Nọgide na-enwe ezigbo ọdịdị mgbe ị na-agbago ugwu bụ ihe dị mkpa na ọ ga-apụta ngwa ngwa mgbe ịnweghị ya. Yabụ ịkwesịrị ilekwasị anya n'idebe obi gị na ubu gị azụ, n'ihi na ọ ga-eme ka ịrịgo ugwu wee dịkwuo mfe ma mesiekwa usoro ahụ dị mma, nke ga-anọnyere gị mgbe ịlaghachi n'ụlọ .Na otu na-aga maka ogwe aka gị, yabụ kpachara anya iji ha mee ka nguzozi gị dịkwuo mma, kamakwa ịkwalite onwe gị gaa elu.
You na-etinye ha n'ime mgbatị gị? Ọfọn, ikwughachi ikiri ụkwụ bụ azịza doro anya, yabụ ịchọrọ ịchọta ikiri ụkwụ ịchọrọ ma ọ bụ, nke ka mkpa bụ nke dabara gị mma. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịrụ ọrụ n'ike ahụ, ịchọrọ ịchọta ihe dị mkpụmkpụ ma sie ike. Ezigbo echiche maka nke a bụ ịgbago ugwu dị ka o kwere mee maka sekọnd 20, ma ọ bụrụ na ọ dị elu nke ọma ọ ga-adị ka ọ dị ogologo oge, wee laghachi ala iji zuru ike.
Tinyegharịa ugboro isii, were ezumike ịgba ọsọ nkeji abụọ ka ịtọpụ ụkwụ gị, laghachi azụ, wee megharịa ọzọ. Ma nweere onwe gị igwu egwu na ọnụ ọgụgụ nke reps ma ọ bụ ntọala na izu ike ole ị nwere, dabere na ahụike gị, mgbe ahụ ị nwere ike imeziwanye ha ka ị na-adịwanye ike ma sie ike. (Joy of Music) Iwuli ike na ntachi obi dị ukwuu n'oge oyi ma dị mkpa maka ọzụzụ ọzụzụ oge gị. otu nke ị nwere ike ịgbaga na nkwụsịtụ ọsọ ọsọ mana nkeji abụọ wee gbadaa na mgbake anyị.
Ugbu a ịchọrọ ịmalite ugboro anọ a na isii dị ka mgbalị na-aga n'ihu, na-anwa ịchekwa otu ọsọ na ọsọ oge ọ bụla ị gbagoro n'ugwu. Ugwu dị mma maka ọtụtụ dịgasị iche iche, yabụ gbaa mbọ tinye ihe na ogologo oge gị n'ihi na ha na-enye gị ezigbo ọgụgụ isi ma mekwaa akwara dị iche iche, ị ga-enwetakwa ike ahụ. Ma a bịa n'ihe gbasara ogologo oge gị, ngwangwa enweghị isi.
Versiondị ikpeazụ nke ugwu na-ekwughachi bụ ugwu ugwu. Ugbu a, anyị ekwuola banyere nke a n'ogologo n'isiokwu bu ụzọ ka ị nwee ike ịlele ya, ọ ga-abụ na nkọwa dị n'okpuru. Mana ikwesiri ịchọta ugwu ma ọ bụ ụzọ nke dị n'akụkụ ugwu ka i wee nwee ike ịrịgo ugwu ahụ, gbadata ugwu ka ịlaghachi n'ugwu gị.
Ọ dịkwa mma ịgbalịsi ike n'elu ugwu ahụ, gbasie ike n'elu, zuru ike, wee nwee ike iru ka ị na-ala ala ala. Na ime nke a, dabere na nha nke akaghị, ị nwere ike ịgba ọsọ na-aga n'ihu ihe dị ka nkeji ise ma kwughachi atọ ruo ugboro anọ na ndị ọzọ na minit ise ọ bụla. Ugbu a, anyị kwesịrị ịtụle ụzọ kacha mma isi gbagoo ugwu ndị a, ma n'ọzụzụ ma ọ bụ n'ịgba ọsọ.
M ekwuolarịrị mkpa ogwe aka gị dị n'ịkwado ịkwọ ụgbọ ụkwụ, n'ihi na mgbe ị gbagoro, ị ga-eweli ikpere gị na ụkwụ gị elu site na usoro ọ bụla iji kparịta ala mkpọda n'ihu gị. Ọ dị mma ibelata ngagharị gị mgbe ọ bụ ugwu gị, ọ bụ ihie ụzọ iji gbalịa idobe otu ogologo oge na ụda gị mgbe ị nọ na ndagwurugwu. Ya mere gbado anya na idobe anya ahụ dị elu ma na-agbago ụkwụ gị n'elu ugwu ị na-aga ije n'ihi na nke a na-enyerekwa ọnọdụ gị aka.
Ihe kachasị mma maka ịrị elu ugwu na-agbada. Ya mere nwee anụrị ma ọ bụrụ na ị na-eji ugwu nta ọzụzụ mgbe ahụ ị nwere ike iji usoro gị dị ka akụkụ nke mgbake gị na-agba ọsọ, ọzọkwa, jiri ya zuo ike ma mee ka ụkwụ gị na-agagharị ka ha nwee ike ịga maka nsogbu ọzọ na-esote njikere ịga ugwu. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ndụmọdụ banyere mgbada ala, anyị nwere isiokwu banyere ya na ị ga-eso gị kọwaa na nkọwa dị n'okpuru.
Ugwu nwere ike ịbụ nnukwu ihe ngọpụ iji pụọ n'okporo ụzọ ma chọpụta mpaghara ọhụụ, ebe ị ga-eji nwayọ na-agbago otu ugwu ka ọ dịrị mfe ịlele ọnọdụ gị yana ịnụ ụtọ gburugburu ndị a. Ma ọ bụrụ na ịnọ ebe ọ bụla ebe apịtị dị, nke ahụ ga - eme ka ị rụọ ọrụ karịa, nke ọma na m hụrụ onwe m n'anya site na iji mgbatị na-arụ ọrụ ka m na - ebelata nrụgide ọ bụ 'ihe ịma aka zuru oke iji nweta elu nke ugwu, ikwesighi ichegbu onwe gị banyere ijeụkwụ ahụ, ị ​​nwere ike ịgba ọsọ ugbu a ma nye gị ohere ịgba ọsọ maka ọ joyụ. Ya mere, puta ebe ahu ma makụọ ugwu a, ha nwere ike buru enyi anyi, ekwere m gi.
Echere na ị masịrị ya, nye anyị mkpịsị aka, dị ka ma pịa ụwa iji jide n'aka na ị nwetara isiokwu GTM anyị niile, yana maka isiokwu ugwu ugwu anyị kwuru maka ya na mbụ, chọta nke a ebe a. Ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ugbu a kilomita 6 mana ịchọrọ ịzụ maka ọkara marathon, nke ọma na anyị nwere nnukwu edemede maka gị, ebe a.
Ugboro ole ka m kwesịrị ịmegharị ugboro ugboro n’ịgba ịnyịnya ígwè?
Maka nsonaazụ kacha mma,meeotu n'ime ndị amgbatịotu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n’izu na ụkwụ ọhụrụ. Ọzọkwa, ọ bụ ezieugwu na-ekwughachiEzuberekabụrụ onye na-ata ahụhụ, ọ bụghị na e zubere hakalie gi. Speedgba ọsọ gị, ike gị, na / ma ọ bụ ike gịkwesịrịdịrị n'ime ihe mgbaru ọsọ dị iche icheikwugharị.June 13. Dec 2019
ịhazila oge na oge siri ike ma ị nwere nhọrọ ma ị ga-eme ya dị ka ikwughachi ugwu ma ọ bụ na larịị, mana nke ị ga-ahọrọ, kedu ka ị si mara ihe ị ga-ebute ụzọ? Sonyere m n’isiokwu a dịka m ga-achọgharị uru na ọghọm nke ha abụọ, ka anyị buru ụzọ leba anya na mgbatị dị larịị, ugbu a ndị a bụ achịcha na butter maka ndị nkuzi na klọb na-agba agba gburugburu ụwa, nke ahụ bụ n'ihi na ha na-azụ ahụ ike gị, ntachi obi, ike na kachasị ma zụọ maka agbụrụ nke ihe ọ bụla site na 5 kilomita ruo marathon, ha na-enyekwa aka dị ukwuu ma a bịa n'ihe ijeụkwụ gị na etiti oge ha nwere ike ịbụ site na 30 Sekọnd ruo nkeji ise na gafere ma ole ị ga - eji ike siri ike dabere na ihe ị na - azụ maka na nke ahụ na - egosikwa izu ike ị ga - ewere, kamakwa ụdị ezumike ị ga - ezu ike I nwere ike inwe mgbe ị kwụ ọtọ, ị nwere ike ịga ije ma ọ bụ ọbụna mee ihe. Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo jogger ọ dabere na ahụike gị na ihe ịchọrọ ịme ya, mana enwere ọtụtụ ohere, nke ahụ bụ otu n'ime ihe mere ndị a ji ewu ewu na klọb ịgba ọsọ. ghọtara na ha bụ isi oge etiti oge, nke ahụ bụ ụdị nwoghara n'ihi na ị ka ga na-arụsi ọrụ ike ma Ha nwere ekele maka ị mepee ikike ikuku gị, ntachi obi na ike gị, ị ga-ahụ na ugwu na-eme ka ị rụọ ọrụ siri ike n'ihi na mgbe ị kụrụ ọ ka ị na-agba ọsọ n'otu ije ahụ dịka ị nọ n'ogo obi gị ga-abawanye na-akpaghị aka, ugbu a anyị doro anya banyere ọdịiche dị n'etiti abụọ ahụ. Oge eruola ilekwu anya, malite na mgbochi mmerụ dịka ọmụmaatụ, ị zubere obere oge dị mkpirikpi, naanị 200 ma ọ bụ 400 na trackwell ga-agba ọsọ ọsọ ọsọ na nke ahụ ga-enwe ọtụtụ mmetụta na ahụ gị na ugwu na ị ga - ewe otu oge ma ị ga - eji nwayọ na - arụ ọrụ n'otu ọsọ ma mee ka obi gị ruo otu ọnụego mana na - etinye obere nrụgide na nkwonkwo gị yana obere nrụgide na ahụ bụ ihe kpatara ọtụtụ ndị egwuregwu nwere ọchịchọ ịgbago ugwu mgbe ha laghachiri na mmerụ ahụ, yabụ gbalịa ịmeghachi ma gosipụta ike ahụ na-agba n'ụgbọelu mana ị na-arụsi ọrụ ike na-enweghị mmetụta.
Otu ihe ahụ na-aga maka ndị mbido na ndị mbido mgbe anaghị eji ha agba ọsọ ọsọ ahụ, mana ha chọrọ n'ezie ịrụ ọrụ na elu ugwu, anyị niile maara na ọzụzụ dị arọ bụ ezigbo enyi na-agba ọsọ, ọ na-enyere aka na arụmọrụ gị na ike gị ị na-ezere mmerụ ahụ na mgbatị ahụ dị mma maka nke ahụ, mana anyị enweghị ike ịnweta mgbatị ahụ ma ọ bụ gaa na nke a bụ ebe ugwu dị mma zuru oke na mgbatị gị ka ha na-etolite ike ahụ ma na-alụ ọgụ ike mgbe ị na-eche banyere ya ị na-etinye ike ndọda na nzọụkwụ ọ bụla, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na plyometrics na ugwu nke ike nwere ike inyere aka na ụdị ịgba ọsọ gị n'ihi na ọ ga-eke ọkụ azụ gị ka ndị glutes gị ga-arụ ọrụ siri ike, nke dị mma maka ịrụ ọrụ arụmọrụ yana Ogwe aka gị bụ. N'ezie ị ga - ahụ onwe gị ka ị na - eji ogwe aka gị mee ihe mgbe ị na - agbago ugwu ma gbanwere ọnọdụ ụkwụ gị ga - agbanwe. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eche na ị na-arị ugwu, mgbe ahụ ị ga-eme ya. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-agba mbọ ịkwụ ọtọ, ị ga-agakwuru onye mgbaasị ma ọ bụ ọbụlagodi ụkwụ anọ iku na-arụ ọrụ nke ọma na-agba ọsọ na ewepụghị n'akụkụ Site.
Anyị ghọtara na ọ bụghị gị niile nwere uru nke mounts n'ọnụ ụzọ gị, mana ị nwere ike iche n'echiche na ọ gaghị abụ onye na-agwọ ọrịa zuru oke iji dozie graji, ma ọ bụrụ na ihe niile ị nwere bụ mkpụmkpụ, dị nkọ, mgbe ahụ karịa nwayọọ nwayọọ ná mkputamkpu ala gị nwere ike Ọ bụrụ na ị na-eme ogologo etiti oge, ị pụrụ ọbụna iji steepụ otú iji obere pụrụ ichetụ n'echiche na ọ na-ekwesịghị ịbụ a dị ọcha hillrep nnọkọ. Ihe dị mma dị mma bụ ime asatọ ma ọ bụ iri dị mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ wee wee gbagoo dị elu ma dị mkpirikpi wee malite ịgba ọsọ gị ma ọ ga - enyere aka na ụdị ọsọ ahụ ma mee ka ihe niile gbaa ya ọkụ. site na nnọkọ a nke ọma dịka ị nwere ike ịhụ na enwere ọtụtụ uru n'akụkụ abụọ, yabụ gịnị ma ị gwakọta ha n'ime mgbatị gị iji nweta ọtụtụ nke m n'onwe m na-eme karịa n'oge oyi na ugwu ugwu mgbe m wuru ike ahụ na mgbe Agbalịrị m imeziwanye ma chọta ọsọ m n'oge oge ịgba ọsọ oge ọkọchị, ana m eme ihe ole na ole na ụlọ ahụ mana m ka na-agbakọ na ebe ahụ, m ga-achọ ịma ihe ị na-eme ihe masịrị gị ma hụ na ị sonyere na nkata ahụ nwere ike ime nke ahụ na nkwupụta ndị dị n'okpuru ebe a na-enye anyị otu ọ bụrụ na ị masịrị ya, lee anya na mmekọrịta mmadụ na ibe m na ị nwere ike iso anyị ebe ahụ yana soro anyị na youtube
Kedu ihe ugwu na-emeghachi mma maka?
Hill kwughachiribụ ụzọ magburu onwe ya maka ndị na-agba ọsọ iji wulite ike, melite ọsọ ọsọ ha, ma wulite ike echiche na ntụkwasị obi haugwuna-agba ọsọ. Ọ bụ ezie na ugwu na-abịa ogologo na ogo niile dị iche iche, echiche bụ isi nke augwu ikwugharịna-abụkarị otu.
Cycgba ugwu n’elu ugwu ugwu ọ na-adị mfe?
O di nwute,biking ugwunaanị na-aghọ n'ezieDị mfe karịaọ bụrụmeeya mgbe niile. Ihe ndị ọzọugwu ntaị rịgoro, ike gwụrụ gịnweta. Jide n'aka na ị tinyere ụzọ ugwu dị na ọzụzụ gị ma nabata ha. Emela iheugwu ntama rapara na mbara ala dị ka ị ga-agbasi mgba ike mgbe mbara ala na-agbaelu.
(egwu sitere n'ike mmụọ nsọ) - Stra chọrọ Strava QOMs? Chọkwara ya ugbu a? Ọfọn, amamihe a nabatara bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ịrịgo nke ọma, a ghaghị ịdọ gị aka na ntị yana ọzụzụ gị, ịdọ aka ná ntị ma kwekọọ na mgbake gị, na ịdọ aka ná ntị na ịhazi nri gị. (Record scratch) Ma amamihe a nabatara bụ ihe ochie ma ọ bụ eziokwu, ịdọ aka ná ntị na nnọgidesi ike dị ntakịrị na-agwụ ike ma ha chọrọ ịdọ aka ná ntị na nnọgidesi ike. Na eziokwu na m gafere ya mgbe ọtụtụ afọ nke ọzụzụ na ịgba ọsọ, yabụ ka anyị lelee ụfọdụ ụzọ aghụghọ ma ọ bụ n'ụzọ zuru oke iji meziwanye oge gị na akpa ịrịgo, QOM ma ọ bụ KOM (egwu egwu) ma ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị iji chekwaa calorie ? Echegbula onwe gị, ị nwere ike idalata ngwa ngwa karịa igwe kwụ otu ebe.
Hapụ ndị otiti n'ụlọ. N'ezie, were ngịga karama ahụ ọnụ. Yiri uwe gị kachasị mfe, yipụ uwe mkpuchi gị, wepụ uwe aka gị, wepụ sọks gị, enweghị mkpa ugogbe anya maka anwụ.
I nwedịrị ike iwepụ ihe okike n'ihi na ị ga-agba ọsọ n'ụzọ ọ bụla, nri? Na ibu bụ ihe niile. Nke a bụ obere esemokwu, mana ọ ga-ekwe omume ịhapụ otu paụnd, mana ọbụlagodi abụọ, tupu ị gawa ịnya anyịnya. Ee ị maara ihe m na-ekwu maka toga na nke abụọ tupu njem gị nwere ike ịchekwa gị ọtụtụ ibu.
Ihe m na-ekwu bụ na ọ ga-efu nnukwu ego iwepụ paụnd abụọ pụọ n’ígwè, ọ ga-ewekwa ọtụtụ ọzụzụ onwe onye ka ị ghara ibu kilogram abụọ n’arọ. Usoro ihe eji eme njem gị, nke ọma, enwere usoro aghụghọ ole na ole ị nwere ike ịnwale. Nwere ike ịnweta kọfị siri ike ma ị nwere ike ịme kpakpando ụfọdụ.
Oh m ga-aga (Nzọụkwụ) (ọnụ ụzọ na-emechi) N'iburu nke ahụ n'uche, ihe ị na-eri n'ime awa 48 na-eduga na nnwale nnwale Strava gị buru ibu nwere ike ime nnukwu mgbanwe na ahụ gị. O nwere ike ịbụ na ị nụla banyere uru ndị a na-ekwu maka nri nri fọdụrụnụ. Nke ahụ pụtara na iri nri nwere obere fiber na-agba ọsọ gaa nnukwu ihe.
Nke ahụ pụtara na ha anaghị ebu ọtụtụ eriri na eriri afọ ha. Ya mere, kpoo salad, kwuo nkpuru osisi na akwukwo nri, rapara na carbohydrates di nma. Ugbu a ị maara na ndụmọdụ ndụmọdụ gbasara nri dị n'akụkụ iri ọtụtụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, yabụ na nke a adịghị mma n'ikpeazụ, nke a bụ ụbọchị 1-2 na-eduga na mmemme ịchọrọ. (egwu dị egwu) musiczọ dị oke ọnụ iji felata.
Nke ahụ bụ eleghị anya ihe anyị niile ga-amasị ịme, naanị imefu, mefuo, mefuo, gburugburu igwe kwụ otu ebe ahụ Mee ka ego ahụ dị mfe dịka o kwere mee ma ị hụrụ igwe kwụ otu ebe gị n'anya, gịnị kpatara ya? M na-eche ebe a na ọ dịbeghị ihe kacha mkpa chọrọ nke 6 pound. Ọ bụrụ na ịrịgo ị na-achọ abụghị nke dị elu, enwere olile anya na ị ga-agbago ọsọ ọsọ. Ọchịchị isi mkpịsị aka maka uru na ọghọm dị ihe dị ka kilomita 20 kwa elekere.
Mana ọ bụ slide, yabụ ọ bụrụ na ị chere na ị na-aga 10, 15 ma ọ bụ 20 kilomita otu awa, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịnya isi gị nọrọ n'ọnọdụ dị elu iji belata ọghọm nke ikuku. Inwere ike itinye ego gị na ikuku, wiil, ikekwe ụzọ abụọ aero, uwe akpụkpọ anụ, okpu agha. Naanị gbaa mbọ hụ na ịzụta ihe ụgbọelu na - acha ọkụ ọkụ nke na - acha ọkụ ọkụ n’ihi na nke ahụ bụ usoro dị oke ọnụ.
Ọ ga-amasị m ịtinye ebe a na nkwekọrịta dị n'etiti ọghọm ikuku na oke igwe gị na akụrụngwa bụ njikarị mgbagwoju anya na nke ọ bụla dabere na steepness, ọsọ ị na-agba, ọnọdụ ikuku, ikuku ikuku, mpaghara ihu gị na ikpuru ọnụọgụ na igwe gị na-amalite site na ụfọdụ ịda. Karịsịa ịdọrọ, ọ bụghị obere ugwu dị elu karịa ikuku ma ọ bụ karịa ga-adị ngwa ngwa karịa ka o kwere mee. Ugbu a, n'ụzọ doro anya, ọnọdụ ikuku nwere ike ime nnukwu ọdịiche na oge gị na ngalaba nke ọ bụla, yabụ mee ọrụ ụlọ gị.
Nyochaa ntụpọ ikuku, na-elele oge oge na kwa ụbọchị, nyochaa ọnọdụ ihu igwe ma melite ozi ka ị wee mara mgbe kachasị mma maka QOM gị. Ihe kachasị mkpa bụ n'ezie nnukwu ọdụdụ, kamakwa obere ikuku ikuku na akọrọ, ọnọdụ dị jụụ na-enyere aka. Dị ka ọ dị na uru, ọ na - enyere aka inwe ezigbo ndị otu egwuregwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ imeri ma nke ahụ bụ ihe ndị ịnyịnya ígwè na - eme.
Nke mbu ị ga - achọ isi mmalite mmalite tupu ọ rịgoro wee chọọ ma ọ dịkarịa ala otu, ọkacha mma ọtụtụ, ọkachamara ọkachamara ga - anọdụ ala n'ihu ebe ebe mgbago na-erughị 20% mkpọda. Ikwesiri ka ndi otu gi zuo ike maka ihe omume a, ihe m na-ekwu bu na ichoghi ime ka gi ghara inwe ike. N’aka nke ọzọ, azụkwala ọzụzụ siri ike ma ọ bụrụ na ị daba n’etiti.
Ọ bụrụ na ọ nweghị ndị enyi gị nwere ike iduzi gị na mpaghara Strava, ma ọ bụ ọ bụrụ na ndị enyi anaghị apụ gị, ikekwe n'ihi omume Strava gị, atụla ụjọ! Kama, ị nwere ike ịkpọrọ di gị ma ọ bụ enyi gị nwoke ma ọ bụ nne na nna gị ma ọ bụ nne na nna nna gị ma ọ bụdị ụmụ nke gị. Tinye ha n’elu igwe eletrik ma were ha kwụpụ site na nzọụkwụ ma kwụrụ ọtọ gbagoro. O doro anya na, ọ bụghị m kpatara ịgba alụkwaghịm ọ bụla ma ọ bụ esemokwu ezinụlọ nke sitere na ndụmọdụ a. (Ọyụ nke egwu) Ezinụlọ na ndị enyi na-ekerekwa na mpụga igwe kwụ otu ebe.
A maara na ikuku na ikuku nke nnukwu ihe omume nwere ike inyere ndị na-eme egwuregwu aka ịmatakwu karịa iji gbalịsie ike maka mmeri. Ya mere, mee ka ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị kwenye na ị kwụ n'ahịrị iji gbaa gị ọkụ na nnukwu QOM mgbe ndị enyi mbụ gị kwụsịrị ịza oku gị yana ezinụlọ gị chere na nsogbu Strava gị adịghị mma yana yabụ onye gị na ya hapụrụ n'ihi na naanị gị ekwu okwu banyere igwe kwụ otu ebe, atụla ya egwu n’elu ekweisi mgbe ị na-agba ịnyịnya. Naanị jide n'aka na ọ bụghị iwu na-akwadoghị ịkwọ ụgbọala na ekweisi ebe ọ bụla ị nọ, zuru oke. (Obi ụtọ na ọ andụ) N'ihi ya, awa ole na ole tupu ihe omume egwuregwu siri ike dị oké mkpa iji gbanye mmanu n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Ọ bụrụ na ịmechara ihe niile dị na njikere, ị chọghị ibibi ihe niile site na ịnwe pizza ma ọ bụ ọbụlagodi elekere abụọ tupu oge ahụ. Ma ọbụlagodi ma ọ bụrụ na i mebeghị ihe niile n'ụzọ ziri ezi, dị ka a ga - asị na ịnweghị ike igbochi mmega ahụ, ka na - achọghị ịgbọ agbọ ọkara. Nri ikpeazụ gị tupu mmega ahụ siri ike dị ka ịrị elu siri ike kwesịrị ma ọ dịkarịa ala elekere atọ tupu ejiri carbohydrates a nụchara anụcha.
Caffeine bụkwa enyi gị. Caffeine na - enyere gị aka ịkwọ ụgbọala ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị na - elezi caffeine anya, ọ bụrụ na ị ghara ị drinkụbiga ya ókè. Iweghachite dị oke mkpa na arụmọrụ.
onyinye igwe kwụ otu ebe
N’ezie, ị nwetakwuoro mgbake, ọ bụghị mmega ahụ. Yabụ na ị nwere K.O.M. ma ọ bụ Q.O.M.
Nke a nwere ike ịbụ ezigbo ihe ngọpụ ka ị ghara ịme mgbatị ahụ ị chọghị ime. O doro anya na ọ bụ ezigbo ihe ngọpụ ka ị ghara ibuli elu, ịzụ ahịa, ihicha, igwu egwu na ụmụaka, ma ọ bụ naanị inwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Dị ka ndị ọkachamara si kwuo, agbanala mgbe ị nwere ike ịgba ọsọ, mgbe ọ bụla ị nwere ike iguzo ọtọ .Ọ dịghị mgbe ị ga-eguzo mgbe ị nwere ike dinara ala.
Mgbe ị dinara ala, hie ụra. Enwere m olileanya na isiokwu a ga - enyere gị aka imezu akụkụ nke ngalaba Strava. Ekwesịrị m ịsị na ọ ga - adị mfe ma na - atọ ọchị karịa ịnya ịnyịnya karịa ma rie obere chocolate ka ọ dị ntakịrị ọsọ, mana ka anyị gaa.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmega ahụ, pịa n’okpuru maka isiokwu ọzụzụ GCN ụfọdụ.
Gịnị mere ịgba ịnyịnya n’elu ugwu ji sie ike?
Ọnụ ọgụgụ nke ndalata ka ukwuu mgbeịgba ugwun'ihi mmetụta ndị ọzọ nke ike ndọda na oge gị. Nke ahụ kwuru, 'ezigbo ụwa' gbanwere ọsọ gị na ike gị dị obereịgba ígwègradients (undetectable na aigwe kwụ otu ebekọmputa) ma enwere ike imeri ya site n'ịgbanwe na nkedo dị ala (nke dị elu).Mar 29 2017
Gịnị mere ịgba ịnyịnya n’elu ugwu ji sie ike karịa ịga ije?
Gịnị mere ịgba ịnyịnya n’elu ugwu ji sie ike karịa ije n’elu ugwu? 'Cgba ugwuenweghị obi ebere, ọ na-enwe mmetụta dị ukwuu n'ahụ gị ozugbo.Na-eje ije, n'ụzọ dị iche, enwere nkwụsị n'etiti nzọụkwụ ọ bụla. Ibu ibu nke igwe - Ikwesiri iji merie ike ndọda site na ntinye ọzọ nkeigwe kwụ otu ebe.Ọgọst 18 2020
Cycgba ígwè n’elu ugwu dị mma?
1. 1.Cygba ígwèmma gị na obimma. Siteịgba ugwu, ngwa ngwa ma ọ bụ naanị na a ngwa ngwa ije ọsọ karịa ka ị pụrụ na a leisurely Sundayigwe kwụ otu ebeịnyịnya, ị ga-ebelata ọbara mgbali gị. Nke a na - ebelata nsogbu a na - etinye n’obi, n’aka nke ọzọ na - ebelata ohere ị nwere ịrịa ọrịa obi.
Ọ dị mma ịgba ọsọ n'ugwu kwa ụbọchị?
GbakwunyereNkịtị na-agba ọsọ
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta ụzọ na ịgbagharịugwu nta, malite itinye ya na ntụgharị izu gị nkena-agba ọsọ. Ọ bụrụ n ’ị ga - eme ya ihe ruru ugboro atọ n’izu, ị ga - erite ọsọ ọsọ na uru ọsịsọ, mana emela ya na ewezuga oke.na-agba ọsọdị mfe ma na-agbake kpamkpam n'etiti mgbatị.
Enwere m ike ịme agba ọsọ kwa ụbọchị?
Hill Sprints nwere ikemechaa 1-2X kwa izu n'enweghị nsogbu, ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 2-3 n'etiti etiti.Meeha bụ akụkụ nke ọzụzụ gị mgbe niileeme. Ọ bụrụ na ị na-emecha ihe omume ndị a 1X kwa izu ịgbatị usoro ọzụzụ na izu 8 nazuru ezuihemgbatịn'okpuru (Izu 1: 1bọchị 1, Izu 2: 2bọchị 2, wdg).Eprel 19 2015
Cygba ígwèna elu ugwu siri ike ma na mbara igwe ma n'ugwu! N’ebe a na - eme mkpọtụ ebe ị na - ebugharị ego na krans (elekere isii, elekere iri na abụọ), ọsọ gị ga - akwụsịtụ nwa oge. Ọnụ ọgụgụ nke ndalata ka ukwuu mgbeịgba ugwun'ihi mmetụta ndị ọzọ nke ike ndọda na oge gị.Mar 29 2017
Bikgba ọgba tum tum ọ siri ike karịa ịgba ọsọ?
Cygba ígwèna-arụ ọrụ nke ọma karịkarịa ịgba ọsọ. E nwere cutoff na nkpoda gradients ebeigwe kwụ otu ebena-aghọ ihe na-agaghị ekwe omume, ọbụlagodi na ịnwe ọkụ, ma eleghị anya na gburugburu 30-40% dabere n'okporo ụzọ na nka.
Gini mere ugwu ji megharia mgbatị kachasi mma?
Mgbe ịga nke ọma Hill Repeats na-agba ịnyịnya ígwè, igwe kwụ otu ebe dị njikere ugbu a na ihu nkọ nkọ tinyere ya / ya họọrọ bike njegharị. Dị ka Kerry Bircher si kwuo dị ka ngụkọta ngụkọta ụmụ nwanyị dum, na-eme usoro mgbatị ahụ na Hill Repeats cgba ịnyịnya ígwè kacha mma n'ihi na ọ na-eweta uru ndị a: Na-enyere aka ịbawanye acid lactic n'ọbara.
Ogologo oge ole ka oge kwesịrị ịdị maka ugwu ugboro ugboro?
N'ozuzu, ndị na-eme egwuregwu na-enwechaghị ahụmahụ na ndị na-adịchaghị mma kwesịrị ịmalite karịa, obere oge dị ka nkeji 4 × 5 ka oge ọ bụla wee nwee ike mechaa na ogo dị elu. Ka ị na - esikwu ike - ka ọzụzụ a na - aga n’ihu - oge ga - adị ogologo oge ọbụlagodi na ngụkọta oge ọ bụla nọsiri ike otu.
Gini mere iji choo ime ugwu?
Oge etiti oge na-ama ụma na-azụ maka obere oge ka ị wee nwee ike ịgba ịnyịnya n'ogo dị elu karịa ihe ị nwere ike ijikwa ogologo oge. Zụọ eriri anụ ahụ dị iche iche. N'ọsọ okporo ụzọ na ọbụlagodi oge dị mkpirikpi (25 kilomita), ị ga-eji eriri anụ ahụ atọ - nwayọ nwayọ, ngwa ngwa na oke ọsọ ọsọ.